> Resource> Naghachi> laptọọpụ Data Recovery: Olee naghachi Data si laptọọpụ Draịvụ
Olee Otú M Pụrụ weghachite Data si laptọọpụ?
Hi niile, ụfọdụ n'ime azụmahịa m ụlọ ọrụ akwụkwọ anọwo na-ehichapụ si m HP laptọọpụ. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike inwe ha azụ? My enyi m gwara m na m faịlụ ndị ka na m na laptọọpụ si ike mbanye. Biko nyere m aka!!
Enyi gị ziri ezi: na-ehichapụ akwụkwọ ka bụ na gị na HP laptọọpụ si ike mbanye. Ma ha pụrụ mfe a ga-overwritten site ọhụrụ data na gị laptọọpụ. Ya mere, ihe ngwọta kasị mma n'ihi na ị na-agbake data si laptọọpụ bụ ịkwụsị iji gị na laptọọpụ na-ahụ a na laptọọpụ data mgbake omume na-enyere gị aka.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ otu n'ime ndị kasị bara uru na n'ihe ize ndụ-free laptọọpụ data mgbake omume na-enyere gị aka naghachi data si laptọọpụ na ala, n'agbanyeghị na data furu efu ruru mberede ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ, ike mbanye formatting, usoro njehie , ma ọ bụ ọbụna virus ọrịa. Ọ na-enye gị ikike iji weghachite ọtụtụ nke faịlụ na ụdị gụnyere ụlọ ọrụ akwụkwọ, ihe oyiyi, ọdịyo faịlụ, videos na ozi ịntanetị site na gị na laptọọpụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na fọrọ nke nta niile ma ama laptọọpụ ụdị, dị ka Lenovo, Toshiba, Sony, HP, Dell, wdg
Ị nwere ike ibudata nzọ version nke Wondershare Data Recovery n'okpuru. Biko họrọ nri version maka kọmputa gị os.
Weghachi Data si laptọọpụ na 3 Nzọụkwụ
Ka ịrụ mgbake na Windows version nke usoro ihe omume. Tupu anyị enweta ya malitere, biko wụnye ihe omume na ọzọ ike mbanye nke gị na laptọọpụ.
Mgbe launching omume na ịgbanwee n'ime "Ọkọlọtọ mode", ị ga-nyere na 3 mgbake ụdịdị ke akpan window. Ị nwere ike ịlele ha ntụziaka nlezianya ịmụta otú ha na-arụ ọrụ. Ebe a, ị nwere ike na-agbalị na "Echefuola File Iweghachite" mode na mbụ.
Nzọụkwụ 2 Iṅomi gị na laptọọpụ si ike mbanye
Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi ike draịva na gị laptọọpụ-akpaghị aka. Ị dị nnọọ mkpa họrọ onye na gị data furu efu si na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu ya.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị na laptọọpụ si faịlụ furu n'ihi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Weghachi data si laptọọpụ
Gị na laptọọpụ si hụrụ data ga-emere na edemede ma ọ bụ ụzọ mgbe iṅomi. Ị na-ekwe ele faịlụ aha ka ego otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji weghachite.
N'ikpeazụ, ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi na pịa "Naghachi" button iji họrọ a nchekwa gị laptọọpụ na-ha.
Biko adịghị ịzọpụta natara data azụ ya mbụ ọnọdụ. Ọ bụ mma ime ka ha dịghachi na a ọhụrụ ike mbanye na gị laptọọpụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake data si laptọọpụ na-agbajikwa ma ọ bụ jiri laptọọpụ, gị mkpa iji gị na laptọọpụ si ike mbanye si na jikọọ na ya ọzọ kọmputa na-eme mgbake.
MacBook Air Draịvụ Data Recovery Guide